Strigunovsky Local | December 2019
Noocyada ugu fiican ee basasha: sifooyinka beeritaanka iyo daryeelka
Editor Ee Doorashada December 12,2019
Ugu Weyn Ee Strigunovsky Local
Waxay u egtahay in wax gaar ah ay ku dhici karto qaanso? Dhadhanka iyo dhadhanka caadada ah, oo keenaya ilmo hoy ah. Laakiin waxaa soo baxday in ay jiraan tiro badan oo ah noocyo badan oo khudraddan, mid kasta oo ka mid ah ma aha oo kaliya shuruudaha Baaskiilkiisa gaarka ah, laakiin sidoo kale dhadhanka iyo bogsashada sifooyinka ka duwan kuwa kale. Sidaa darteed, haddii aad leedahay noloshaada oo dhan waxay aaminsan yihiin in aadan jecleyn basasha oo had iyo jeer ka soo saaro suxuunta, waa inaad weli isku daydaa inaad barato noocyo cusub.
Hababka wax ku oolka ah ee lagula dagaallamo cayayaanka iyo cudurada
Daryeelka habboon ee dhirta Pachira Aquatika (Biyaha) guriga dhexdiisa ee guryaha, sawir iyo la dagaallanka cudurrada
Ka-tirtiridda cawaaqibta daryeel-caafimaadeedka aan habboonayn: sida loo koro xididdada phalaenopsis?
Postulates of cheflers taranta guul leh guriga
Cudurada caamka ah ee caadiga ah ee digaagga. Calaamadaha iyo qaababka daaweynta
Geedaha kulaylaha iyo kulaylaha Afrika, Aasiya iyo Ameerika waxaa jira dad badan oo ka mid ah caleemaha Begonian, oo ay ka mid yihiin in ka badan 900 nooc iyo qiyaastii 2000 qaabab isku dhafan. Kuwani waa dhirta cagaarka ah, geedaha dhirta iyo duurka, kuwaas oo ka mid ah waxaad ka heli kartaa labadaba caleemo iyo caleemo saarista caleemo. Qeybta labaad ee qarnigii la soo dhaafay, waxay degeen Yurub, iyo thanks to caleemaha iyo ubaxa, waxay ku dhaceen in jacayl la bannaanka u. Read More
Sida loo hirgeliyo strawberries xilliga dayrta: qaababka daryeelka berry
Waxyaabaha ugu weyn ee bacarimiso for yaanyada ee lagu koriyo: goorma, sida, iyo waxa Bacriminta si ay u sameeyaan?
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Strigunovsky Local 2019